Torohevitra fototra momba ny dia amin'ny fotoana voan'ny coronavirus | Vaovao momba ny dia
Ny fitandremana rehetra dia fototra ary fantatsika izany! Noho izany, manaja hatrany ny fepetra rehetra, afaka manatanteraka an'io dia efa nokasainay am-bolana maro io izahay. Na dia misy aza ny olona mbola tsy sahy nanao dingana mihoatra ny faritra misy azy, maro ny hafa no nisafidy ny hanangona ny kitapony. Noho izany, mora ny manoratra ny toro-hevitra fototra amin'ny dia.
Na inona na inona safidinao, tsy maintsy tadidintsika ny dingana maromaro hatao, na dia afaka mankafy ny tenantsika araka ny tokony ho izy aza isika. Satria ho avy ny fialantsasatra ary mila miala isika, araka izay tratra. Handeha hanao dia lavitra toa ny noeritreretinao na dia tamin'ny fotoana taloha aza ianao Coronavirus?
1 Ny fiarovana dia iray amin'ireo torohevitra fototra amin'ny dia
2 Ny dia amin'ny fiaramanidina
3 Ny mampionona ny fiaranao mandeha
4 Karazan-dia inona no atoro anao?
5 Dia tsara mamaky an'i Espana
Ny fiarovana dia iray amin'ireo torohevitra fototra amin'ny dia
Tsy ny fitsangatsanganana fotsiny, fa ny hivoahana ny trano fotsiny. Noho izany, ny iray amin'ireo dingana voalohany tsy maintsy hazavaintsika tsara dia ny hoe isaky ny mandeha isika dia tsy maintsy miaro tena tsara. Amin'ny lafiny iray, ny hanafina Izy io dia efa iray amin'ireo kojakoja ilaina foana izay miaraka amintsika ary mazava ho azy, ny kojakoja rehetra mba tsy ho lany safidy. Fa etsy ankilany, tsy afaka mamela ny gel sy ny fanasana tanana tsara isika. Dingana roa hafa izay miaraka amin'ny sarontava. Azo antoka fa efa fantatrao fa tokony hataonao mandritra ny 25 segaondra izany ary hahatratra hatrany isaky ny zoro tanana.
Ny dia amin'ny fiaramanidina
Voalohany indrindra, raha handeha handray ny fiaramanidina ianao dia tsy maintsy manomboka amin'ireo dingana voalaza etsy ambony ireo. Be tokoa ny sarontava ho toy ny fampiasana ny gel sy ny fanasana tanana amin'ny ankapobeny dia atolotra matetika kokoa izy ireo. Marina fa indraindray tsy afaka mitazona ny halaviranay isika fa tsy maintsy manaraka hatrany ny torolalan'ny olona tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity. Mba hisorohana ny fahatongavanao tara na tsy maintsy mandeha amin'ny fitateram-bahoaka isan-karazany dia azonao atao ny mamela ny fiaranao any amin'ny parking. Amin'izany fomba izany, ho voaro tanteraka ny fiaranao ary tsy hiditra amin'ny fiaramanidina fotsiny ianao ary hankafy ny toerana alehanao. Ny hevitra momba ny fijanonana dia tsy maintsy raisina an-tsaina foana, satria manao ny famandrihanao mandritra ny andro ianao, mandra-pahoviana ny fiaranao ary antoka iray izany hahatonga anao hanadino ny zava-drehetra mandritra ny andro vitsivitsy.
Ny mampionona ny fiaranao mandeha
Mazava ho azy fa olona maro hafa koa no misafidy ento n'aiza n'aiza ny fiara. Averiko indray fa tsy maintsy misafidy toerana tsara apetraka ianao, saingy manome ny fahaleovan-tena afaka mifindra isaky ny aiza na aiza no tianao, tsy misy fandaharam-potoana. Ankoatr'izay, mihena ny fepetra fiarovana ary be dia be. Azonao atao ny mandray ny valizinao sy zavatra hohanina hankanesana any amin'izay halehanao. Ny sarontava dia handeha eo anilanao sy ny fianakavianao foana. Fa amin'ity tranga ity, ny gel na ny fanasan-tanana dia tsy hampiasaina rehefa mijanona na mankany amin'ny trano fidiovana amin'ny gara rehetra. Toa nitombo ity taona ity ny fangatahana motera ary safidy hafa hitahiry.
Karazan-dia inona no atoro anao?
Tsy maintsy misafidy ny azy ny tsirairay, marina fa ao anatin'izy rehetra dia misy tolo-kevitra foana. Amin'ity tranga ity dia voalaza fa ny ety ivelany, izay tsy ahitantsika ny tenantsika miaraka amin'olona maro loatra, no ho fototra. Noho izany dia afaka misoroka foana isika ankamaroan'ny faritra fizahan-tany ekena ary misafidy tanàna na toeran-kafa mety tsy izany, fa hanana ny hatsarany koa izany. Noho izany, angamba hiala amin'ny fidirana amin'ny toerana voafaritra sy mihidy isika hankafizantsika izay omen'ny natiora antsika.
Dia tsara mamaky an'i Espana
Ny toro-hevitra fototra iray hafa momba ny dia amin'ity taona ity dia ny fijanonana amin'ny tanintsika. Marina fa misy teboka vitsivitsy voakitika kokoa noho ny sasany, kanefa na izany aza dia afaka mitady toerana aleha isika mankafy mandritra ny fotoana fitsaharana. Taorian'ny fiatoan'ireo volana lasa izay dia tsy misy zavatra hafa toy ny mahita sy manome aina ny zoronay indray. Ka azo antoka fa efa naheno imbetsaka ianao fa tsy maintsy nampiroborobo an'ity olana ity izahay ary nanaiky izahay. Eny, misorata anarana amoron-dranomasina na angamba any an-tendrombohitra, trano any ambanivohitra ary fitsangantsanganana. Azo antoka fa ho hitanao io toerana tsy fantatrao io ary hahagaga anao izany. Fa ny zavatra tsara indrindra dia ny mahita azy kilometatra vitsivitsy miala ny trano izay hamonjy antsika be dia be ary hanampy antsika hiala sasatra. Toa zavatra be dia be indray mandeha, fa tena azo tanterahina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialan-tsasatra » Torohevitra fototra momba ny fivezivezena amin'ny fotoana voan'ny coronavirus
Inona no hitsidika an'i Cagliari
Inona no hitsidika an'i Filipina